Ịmụta + Ọmụmụ Ihe - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
Gharite Spectrumschool gaa n'asụsụ ọzọ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Ọmụmụ Ihe +
Mụta + nkà
(oge agụmakwụkwọ oge nile BSO / TSO)
Ị na-agbaso usoro oge nile na BSO / TSO larịị. Ị nweta ihe ọmụma dị mkpa. Tụkwasị na nke a, ị ga-enwe ike n'ọhịa gị.
Ị nwere ike ịgbaso ụzọ a campus Ruggeveld.
Ọ bụrụ na ị gafere otu usoro ihe omume anyị, ị ga-eme ya diplọma nke mmụta sekọndrị. A na-enwekwa akwụkwọ njikwa ụlọ ọrụ. Na Usoro BSO kwadebe gị maka ọrụ. Ị maraiche na mpaghara gị ahọpụtara na afọ 7. Na Nkwado TSO nye gị ntọala siri ike elu ọmụmụ malite n'ime ubi gị.
Ụlọ akwụkwọ anyị na ụlọ akwụkwọ na-enye anyị otutu ohere di irè.
N'ihi na anyị dị nso imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ anyị na-eduzi gị otu ebe dị mma n'ahịa ahịa.
Anyị na-enye gị otu eji akwa-eme ụzọ ebe nduzi onye ọ bụla na otu ọkụ mmụta ihu igwe n'etiti.
Usoro ọzụzụ nke mmụta + Ọmụmụ
Pịa otu n'ime ihe ndị na-esonụ na-amasị ịchọta agụmakwụkwọ gị.
Egwuregwu 1e Degree
STEM> Engineering & Technology
Ụlọ & Ọkụ
Afọ 7e maka iche iche
NDỤMỌDỤ ỤLỌ // B-Nzuzo // CAMPUS RUGGEVELD
Ị nwere ike ịtọ utọ dị iche iche dịka igwe, ígwè, ọkụ eletrik, osisi, wdg. Nke a ga - eme ka ịhọrọ ihe ọmụmụ ziri ezi maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nhazi 2.
OZU-Oge / A-Nkọwa // CAMPUS RUGGEVELD
STEM na-anọchite anya Science, Technology, Engineering & Mathematics. Dika "di omimi di iche iche" i na-eme ihe omuma ihe, ihe okike, iche echiche nke nsogbu, nche echiche, na otutu ihe ndi ozo!
ị na-agbaso agụmakwụkwọ sara mbara. Tụkwasị na nke a, ihe ọmụma nwere alaka ụlọ ọrụ dị iche iche. N'ụzọ dị otú a ị dị njikere maka ntụziaka egwuregwu.
Oge ntinye // TSO // CAMPUS RUGGEVELD
Ị chọpụta ụwa nke engines na generators, automation, PLC controls, ... Ị na-amụta otú e si achịkwa igwe ma jiri ya mee ihe n'ụzọ kọmputa (CNC, CAD-CAM). Nkwupụta zuru oke na nkà na ụzụ mmepụta ihe.
Nkà na ụzụ & usoro ntanetị
Ị maara ọkụ eletrik na teepu nrụnye na ị kwadebe onwe gị maka ịmepụta ọrụ na mpaghara ọkụ eletrik.
TSO Education Physical na Sport
Ndị na-agba ọsọ n'egwuregwu ahụ na-eso agụmakwụkwọ egwuregwu na-eme egwuregwu na ịmatakwu egwuregwu dị iche iche (egwuregwu, egwuregwu bọl, gymnastics, swimming ...). A na - atụlekwa ọzụzụ, nkwado ọnọdụ, nkwupụta na nchebe onwe onye. Ị ga - aghọkwa egwuregwu egwuregwu?
NKWỤKWỌ NDỊ NKWUKWỌ 7E ỌGỤRỤ // Ụdị Oge // BSO // CAMPUS BACKGROUND
Ị na-amụta iji chọpụta njehie nchọpụta kọmputa na-achịkwa kọmputa na sistemụ kọmputa nke ụgbọ. Ị na-amụtakwa usoro iji dozie nsogbu ahụ.
Ụdị-oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD
Ị na-amụta usoro aghụghọ ahụ; dozie diagnoses ziri ezi ma ọ bụrụ na enwere ntụpọ, jide ụgbọala ma rụzie nhazi dịka iwu nke nkà. Ị na-arụ ọrụ n'adabereghị na ụgbọala, vans, wdg.
Ụlọ ọrụ Mechanics Car abụọ
Ị mụtara ịrụ ọrụ n'adabereghị n'ụgbọala, ụgbọala, ụgbọala, wdg. ị na-amụta iji mee nchọpụta ziri ezi maka ntụpọ, na-edebe ụgbọala ma rụzigharị dịka iwu nke nkà.
Ị na-achọ iji aka gị na-arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ? Na nke a, ị nwetara ihe ọmụma na ahụmịhe bara uru na mpaghara nke ime ụlọ na nke mpụga, ihe eji emepụta ụlọ na ime mma.
Ị na-adọrọ mmasị n'ịdị mma ma na-emechasị ime ụlọ.
Ị mụtara ịwụnye nrụnye eletrik ọhụrụ n'ụlọ. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike ịmezi ma kwadobe nrụnye dị ugbu a. Ị ga-amụtakwa ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ eletriki eletrik na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ eletrik.
Ị mụtara iji wụnye nrụnye eletriki ọhụrụ na ụlọ na ụlọ. Tụkwasị na nke a, ị nwekwara ike ịmezi ma kwadobe nrụnye dị ugbu a. Ị ga-amụtakwa ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ eletriki eletrik na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ eletrik.
Igwe injinia Duaal
7E SPECIALIZATION ỌGỤRỤ // elu // BSO // CAMPUS RUGGEVELD
Ị na-arụ ọrụ nlekọta, mgbakọ ma rụkwaa n'otu aka nke elu, ọnụ ụzọ, nkwụsị; N'aka nke ọzọ na ikesa ike, ụgbọala na nnukwu nkà na ụzụ.
Ngwá ọrụ ígwè ọrụ
Ị na-amụta akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ igwe na-achịkwa kọmputa iji dezie ihe. Ị na-amalite na-atụgharị, na-egwe ọka ma na-egweri ma ị mụta ịbakota ma kwatuo ihe owuwu. Ị na-amụtakwa otu esi arụ ọrụ na CNC igwe. Ị mụtara ịmepụta nke ọma na nbudata ọrụ, nyocha ọrụ na ụzọ ọrụ.
Ị kpochapụrụ iche na usoro CNC dị iche iche, yana akwụkwọ obibi 3D. Ị mụtara otú e si emepụta ihe na ngwanrọ ọkachamara, na-elepụta CNC mmepụta.
Ọzụzụ a na-akwadebe gị maka ọrụ na nwata, ndị agadi na nlekọta ụlọ.